တရုတ်နိုင်ငံ၏ အပန်းဖြေကျွန်း ဟိုင်နန်တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ခရီးသွားဧည့်သည် ၈၁ သန်းကျော် ဝင်ရောက် - Xinhua News Agency
ဟိုင်ခို၊ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း အပူပိုင်း ကျွန်းပြည်နယ်ဖြစ်သော ဟိုင်နန်တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ ခရီးသွားဧည့်သည်ပေါင်း ၈၁ သန်းကျော် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ယမန်နှစ်ကထက် ၂၅.၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ယင်းပမာဏမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်က ရှိခဲ့သည့်အရေအတွက်၏ ၉၇.၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှကြောင်း ဒေသခံအာဏာပိုင်များက ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ဟိုင်နန်ရှိ စုစုပေါင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝင်ငွေသည် ယခင်နှစ်က ၅၈.၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ယွမ် ၁၃၈.၄ ဘီလီယံခန့် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၁.၇ ဘီလီယံခန့်) မြင့်တက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကထက် ၃၀.၉ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အားကစားဌာနအရ သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ဟိုင်နန်သည် ခရီးသွားလုပ်ငန်း စီမံကိန်း ၃၂ ခုအား သဘောတူညီချက်များ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် မိတ်ဆက်ခြင်းများ အပြင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အားကစားနှင့် ဆက်စပ်သော ကုမ္ပဏီအသစ် ၄၀ ကျော် ထူထောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ပြည်ပ အခွန်ကင်းလွတ်ဈေးဝယ်ခြင်းမှ ယွမ် ၄၉.၅ ဘီလီယံရှိခဲ့ပြီး ယမန်နှစ်ကထက် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ကာ ဈေးဝယ်သူ ၆.၇၂ သန်းက ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်း သန်း ၇၀ ကျော် ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဟိုင်နန်ရှိ ပြည်ပအခွန်ကင်းလွတ် ဈေးဆိုင်များ၌ တစ်ဦးချင်းဝယ်ယူမှုပမာဏသည် ၇,၃၆၈ ယွမ် ရှိပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀.၂ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဟိုင်နန်အား ၂၀၂၅ ခုနှစ်မတိုင်မီတွင် နိုင်ငံတကာခရီးသွားလာရေးနှင့် သုံးစွဲမှုစင်တာနှင့် ၂၀၃၅ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လွှမ်းမိုးမှုရှိသော ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် သုံးစွဲမှုနေရာအဖြစ် တည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
China’s resort island of Hainan receives over 81 mln tourists in 2021
HAIKOU, Jan. 13 (Xinhua) — More than 81 million domestic and overseas tourists visited south China’s tropical island province of Hainan in 2021, up 25.5 percent year on year, which is equivalent to 97.5 percent of the number in 2019, local authorities said Thursday.
Hainan’s total tourism revenue increased 58.6 percent over the previous year to about 138.4 billion yuan (about 21.7 billion U.S. dollars), up 30.9 percent compared to 2019, according to the provincial department of tourism, culture, radio, television and sports.
Last year, Hainan saw the inking of agreements and launch of 32 tourism projects as well as the establishment of over 40 new companies related to tourism, culture and sports.
The province reported 49.5 billion yuan of offshore duty-free shopping in 2021, up 80 percent year on year, with more than 70 million items purchased by 6.72 million shoppers.
The per capita shopping amount registered in the offshore duty-free shops of Hainan logged 7,368 yuan, an increase of 20.2 percent compared to 2020.
Photo : Customers visitaduty-free shop in Haikou, south China’s Hainan Province, Oct. 4, 2020. (Xinhua/Pu Xiaoxu)